healthy life style – Page5– Healthy Life Journal
သက်ရှည်ကျန်းမာစေရန် လိုက်နာသင့်သော ရိုးစင်းလွယ်ကူသည့်နည်းများ
———၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊——— ကျန်းမာရေးကို အလေးထားဂရုစိုက်တာကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရာ လူတိုင်း နေ့စဉ်လိုက်နာသင့်တဲ့ အလွယ်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) နံနက်စောစော အိပ်ရာထပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။ (၂) ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊...
ဖျားနာချိန် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သက်သာလာစေရန် အနားယူနည်း
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အခါ အနားယူဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲနေချိန်မှာ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန်ပါမှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သက်သာလာမှာဖြစ်လို့ပါ။ (၁) သင်အနားယူမယ်ဆိုရင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရှိတဲ့ အခန်းထဲမှာ အိပ်ရာပေါ်လှဲလျောင်းရင်း အနားယူပေးပါ။ တီဗီကြည့်ရတာ သဘောကျရင် တီဗီရှိတဲ့အခန်းထဲမှာ...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပြုံးပြုံးလေးနေတာက သင့်ကို ပုံမှန်ထက် ပိုတောက်ပစေတဲ့အပြင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ အပြုံးကြောင့် သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေသလို ဖိစီးမှုအဆင့်ကို လျော့ကျစေကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ (၁) အပြုံးက သင့်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ် လူတွေကို ပြုံးနေတဲ့ပုံဆွဲလိုက်တဲ့အခါ...
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကြို့ထိုးတာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ မကြာခဏ ကြို့ထိုးတာက ရောဂါဝေဒနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတတ်ပါသလား။ ကြို့ထိုးတာ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရပါသလဲ။ A. ကြို့ထိုးတယ်ဆိုတာက ရင်ဝမ်းတားကြွက်သားက...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူငယ်တော်တော်များများဟာ ဖုန်းမရှိရင်မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာကြပြီ။ ဖုန်းကို အိပ်ရာနိုးချိန်ကစလို့ အိမ်သာတက်ချိန်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို စောင့်ဆိုင်းချိန်၊ ဘတ်စကားစီးချိန်တွေပါမကျန် လက်ထဲမှာ တကိုင်ကိုင်ဖြစ်လာကြပြီ။ ဖုန်းစွဲလမ်းတဲ့ပြဿနာကြောင့် အလုပ်ထဲမှာ အဆင်မပြေတာရှိသလိုပဲ ဖုန်းကို သိမ်းမထားသင့်တဲ့နေရာမှာ သိမ်းထားမိတဲ့အတွက်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။...
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို တိကျစွာ သိနားလည်စေရန်
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်လို့ စားသင့်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့အားလုံးက သိနားလည်နေကြပေမယ့် ဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးပြုနေသလဲဆိုတာကို တိတိကျကျ သိနားလည်မှုရှိစေဖို့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာ...
အလုပ်ထဲမှာ နေ့လယ်နေ့ခင်းဆိုရင် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ ကျကျသွားတတ်ပါသလား . . .
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— တစ်နေ့လုံး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်ရသူတွေဟာ နေ့ခင်းအချိန်ရောက်လာရင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကင်းဝေးပြီး လန်းဆန်းလာစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) အပြင်ထွက်ပြီး နေ့ခင်းအလင်းရောင်နှင့် အချိန် ၁၀ မိနစ်ခန့် ထိတွေ့ပါ...
အသက်ကြီးသူများ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သည့် အကြောင်းများ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အရင်တုန်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကို ငယ်ရွယ်သူတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေအနေနဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေလို ကြွက်သားထုထည်အားကောင်းဖို့၊ ခွန်အားရှိဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါရဲ ့။ ဟားဗတ်လေ့လာမှုတွေက အရင်ကရှိခဲ့တဲ့ အယူအဆတွေကို ဖယ်ခွာလိုက်ဖို့ သုတေသီတွေရဲ...
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ရာသီဥတုပူပြင်းတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အမင်းလုပ်တာတွေကြောင့် ချွေးအလွန်အမင်းထွက်တာမဟုတ်ဘဲ တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်လည်း ချွေးအလွန်အမင်းထွက်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (၁) လက်ဖဝါး၊ ခြေဖဝါး၊ ချိုင်းတို့တွင် ချွေးထွက်များခြင်း ချွေးအလွန်အမင်းထွက်တဲ့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးချွေးထွက်များတာနဲ့ တချို ့အစိတ်အပိုင်း၊...
နုပျိုငယ်ရွယ်မှုကို အချိန်မတိုင်မီ ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည့် အချက်များ
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်အသက်က ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ စောလွန်း/ နောက်ကျလွန်းနေတာမျိုး မရှိပါဘူး။ အခုအချိန်က အသားအရေ ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာဖြစ်တဲ့ အရေပြားက လူတွေမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး သင်ရဲ...